हिउँदमा २०० रुपैयाँ तिरेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता - नेपालबहस
हिउँदमा २०० रुपैयाँ तिरेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता
| ९:०४:३१ मा प्रकाशित
३० कार्तिक, कञ्चनपुर । भौगोेलिक रूपले सबैभन्दा पिछडिएको कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीयबासीले वर्षौँदेखि दोदा नदी वारपार गर्न शुल्क तिुनपर्ने बाध्यता कायमै छ । दोदा नदीमा हिउँदका बेला पानीको बहाव कम हुँदा ट्युबबाट तरेर स्थानीयले गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ ।
लालझाडी–४ का लोकेन्द्र रानाले दशकौँदेखि आफूहरु नदीमा पुल नबन्दा रकम तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेको दुखेसो पोखे । “पहाडमा तुइन तरे झैँ हामीले पैसा तिरेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “ट्युबमा मोटरसाइकलसहित वारपार गर्नु पर्दा एक पटकको रु २०० तिनुपर्छ ।”
लोकेन्द्र जस्तै लालझाडीका प्रायः स्थानीयवासीले हिउँदमा यही समस्या भोग्नुपरेको छ तर राज्यको यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । “हिउँदमा नदीमा पानी कम हुन्छ, पानी कम भए पनि रु २०० तिरेर त जान सकिन्छ”, रानाले भने, “बर्खामा त बाढीले आवागमन नै ठप्प हुन्छ ।”
यहाँको वाणी–देखतभुली–पर्सिया जोड्ने सडकखण्ड अन्तर्गत दोदा नदीमा पक्की पुलको निमार्णमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण झन समस्या भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । “बन्दाबन्दीले दैनिकी उत्तिकै अस्तव्यस्त बनेको छ”, रानाले भने, “मजदुरीका लागि घर छोड्न लाग्दा पनि शुल्क तिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।”
दोदा नदीमा वारपार गर्न साइकलको रु २० र मोटरसाइकलको रु २०० तिर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको पहुँच सार्वजनिक यातायातसित अझै जोडिएको छैन । स्थानीय रामसाहेब रानाले गाउँमा बिरामी परेर एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्दा निकै हैरानी हुने गरेको बताए । “रातिको समयमा कसैलाई अस्पताल लैजानु पर्यो भने निकै समस्या हुन्छ”, उनले भने, “सडक सञ्जाल र पुलहरु नबन्दा पैसा तिरेर पनि सुविधा पाइरहेका छैनौँ ।”
त्यसैगरी लालझाडी–४ का भजना राना पनि बर्खामा आवागमन नै बन्द हुने गरेको बताउँछन् । “नदी पारपार गर्ने क्रममा विगतमा दुई÷तीन स्थानीयवासीले ज्यानसमेत गुमाइसके”, उनले भने, “वारि घर पारि खेत हुनेको पनि समस्या नै छ ।”
ट्युबमार्फत नदी तार्ने छेउमै निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र छ । स्थानीय युवाले ट्युब सञ्चालनमा ल्याएर नदी तार्ने काम गर्दै आएका छन् । पक्की पुलको तीन पिलर मात्रै निर्माण भएको तर निमार्ण कार्य भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि २०७२ पुसमा रु २४ करोड ५३ लाखमा निर्माण सम्झौता भए पनि पुलको आधा काम पनि भएको छैन ।
यस वर्ष दुई दिन कार्तिक नाच मञ्चन गरिने १२ घण्टा पहिले
मनकामना बजार खुल्यो, खुलेन केवलकार ! सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग ५ घण्टा पहिले
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, भाषणमा सुशासन भन्नेले व्यवहारमा देखाऔँ ८ घण्टा पहिले
सप्तरी राप्रपा संयोजकमा साह सर्वसम्मत चयन ५ घण्टा पहिले
आज मिथिलाञ्चलमा अक्षय नवमी पर्वको रमझम १७ घण्टा पहिले
कांग्रेसका सांसद पाण्डेले लिए गोपनीयताको सपथ १० घण्टा पहिले
सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न ओलीकाे आग्रह ८ घण्टा पहिले
जीवनस्तर उकास्न सामूहिक आलुखेती गर्दै दलित महिला [ फाेटाे फिचर ] ११ घण्टा पहिले
चितवनमा कार्तिक महिनामा मात्रै १० जनाको मृत्यु ४ दिन पहिले
नेकपाका परित्याग गरि ककनीमा सयौं कार्यकर्ताहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश ४ दिन पहिले
भेडीगोठमा भालु पसेपछि…… ६ दिन पहिले
कोरोना महामारीमा पनि छठको उत्साह ६ दिन पहिले
पर्यटनको अर्को गन्तव्य ‘बेथानचोक नारायणस्थान डाँडा’ २ दिन पहिले
राजनीति मूल्य, मान्यतामा आधारित नभए देश र जनताको हित हुन सक्दैन : अध्यक्ष यादव १ दिन पहिले
आकाशेपुलमा बम भन्दै ढुंगा भेटिएपछि…. १ दिन पहिले
आजदेखि तराई तथा मधेसमा छठ पर्व शुरु ६ दिन पहिले
मिठाई किन्दा कुमारी बैंकका कार्डवाहकले ५ प्रतिशत छुट पाउने ३ हप्ता पहिले
अर्थमन्त्रीलाई १३ बुँदे सुझाव पत्र ४ हप्ता पहिले
ताप्लेजुङमा सय शै्ययाको आइसोलेशन सेन्टर निर्माण गरिने २ हप्ता पहिले
पाल्पामा दुई संक्रमितको ज्यान गयो १ हप्ता पहिले
बेलायतमा क्रियाशिल नेपाली चलचित्रकर्मीलाई लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गर्यो सम्मान २ हप्ता पहिले
अब चाहिं नेकपा जोगिने आधार सकियो २ हप्ता पहिले
तिहारपछि खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउन बन्द २ हप्ता पहिले
सङ्कटमा अजिगरा ताल ४ हप्ता पहिले
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई छिट्टै स्वदेश ल्याउने सरकारको तयारी ६ महिना पहिले
चोरीका मोटरसाइकलसहित दुई युवक पक्राउ २ महिना पहिले
नेकपा संसदीय दलको बैठक स्थगित ७ महिना पहिले
सुुदूरपश्चिममा हलियाका लागि कार्यक्रम अघि बढाइने : मुख्यमन्त्री भट्ट ९ महिना पहिले